Factory flywheel fiara, mpamatsy - China Car flywheel Manufacturer
anaran'ny vokatra: Ao anatiny fitaovana enti-peratra 6CT
marika fiara: Cummins
Laharana fanampiny: 3415350 3415349
Modely fiara mety: 6CT8.3
Amin'ny faran'ny herinaratra famaranana ny crankshaft, izany hoe ny lafiny mampifandray ny boaty sy ny fitaovana fanaovana asa. Ny tena asan'ny flywheel dia ny fitehirizana angovo sy ny tsy fahatomombanana ivelan'ny herin'ny herin'ny motera. Ho an'ny motera efatra-kapoka, ny angovo azo entina, ny famohana ary ny fivoahana ho an'ny kapoka iray ihany no avy amin'ny angovo voatahiry ao anaty flywheel. Ahitsy ny fifandanjana. Ny fifandanjan'ny motera dia miankina amin'ny sakana mizana amin'ny hazo. Ny milina tokana-varingarina dia manana tahony mizana manokana.
Ny flywheel dia misy inertia lehibe. Koa satria tsy mijanona ny asan'ny varingarina tsirairay ao amin'ny motera, dia miova ihany koa ny hafainganam-pandehan'ny motera. Rehefa mitombo ny hafainganam-pandehan'ny motera dia mitombo ny angovo kinetika an'ny flywheel, mitahiry angovo; rehefa mihena ny hafainganam-pandehan'ny motera dia mihena ny angovo kinetika an'ny flywheel ary mamoaka angovo. Ny flywheel dia azo ampiasaina hampihenana ny fiovaovan'ny hafainganam-pandeha mandritra ny fiasan'ny motera.
Izy io dia apetraka amin'ny faran'ny aoriana ny crankshaft maotera ary misy tsy fahatomombanan'ny fihodinana. Ny asany dia ny mitahiry ny herin'ny motera, mandresy ny fanoherana ireo singa hafa, ary mihodina mihodina ny crankshaft; ampifandraiso ny motera sy ny fifindran'ny fiara amin'ny alàlan'ny clutch napetraka amin'ny flywheel; ary manomboka Ny motera dia mirotsaka hanamora ny fiandohan'ny motera. Ary ny fampidirana ny tsindry crankshaft sy ny fahatsapana ny hafainganan'ny fiara.
Ao amin'ny herin'ny herinaratra, ny angovo ampitain'ny motera mankany amin'ny crankshaft, ankoatry ny vokatra ivelany, ny ampahany amin'ny angovo dia entin'ny flywheel, ka tsy hitombo be ny hafainganan'ny crankshaft. Ao anatin'ireo kapoka telo an'ny havizanana, ny fandraisana ary ny faneriterena, ny flywheel dia mamoaka ny angovo notehiriziny hanonerana ny asa lanin'ireto kapoka telo ireto, mba tsy hihena be loatra ny hafainganan'ny crankshaft.
Ho fanampin'izany, ny flywheel dia manana ireto asany manaraka ireto: ny flywheel dia ampahany mavitrika amin'ny fihazonana fikikisana; ny peratra fanenomana flywheel hanombohana ny motera dia tafiditra ao amin'ny sisin'ny flywheel; ny marika afovoany maty ambony dia voasokitra ihany koa eo amin'ny flywheel ho an'ny fanamafisana ny fotoanan'ny ignition na ny fotoana fampidirana solika ary hanamboarana ny famafana ny valizy